Factory Pipe Series Series - Mpanamboatra Series Pipe ao Shina
Pipeo rano mafana sy mangatsiaka PE-RT
Ny fitoniana hafanana tsara sy ny fanoherana ny hafanana maharitra Ny fantsona dia manana homogeneity tsara sy fahombiazana maharitra. Ny fampiharana amin'ny rafitra rano mafana dia afaka manome antoka ny fampiasana 50 taona. Ny fahombiazan'ny fanodinana tsara sy ny fantsom-pitaovan'ny PE-RT tsy miova dia tsy mila mandalo ny dingam-pifandraisana, tsy mila mifehy ny diplaoma mifampitohy sy ny fitoviana, vitsy kokoa ny rohy famokarana, ny vokatra dia homogen, ary ny kalitao dia marin-toerana sy azo itokisana. Malalaka sy mora ampiharina Azo ahodina ...
Sodina PE-RT fantsom-panafenana mamiratra
Fampiononana, fahadiovana ary fahasalamana Ny fanaparitahana ny hafanana amin'ny taratra no fomba fanafanana tsara indrindra. Mitovy ny maripana an-trano, ary mihena tsikelikely ny mari-pana any ambany ka hatrany ambony, manome hafanana ny tongony sy hampangatsiaka ny lohany ny olona. Tsy mora ny miteraka fandotoan'ny rivotra maloto. Madio dia madio tokoa ny efitrano, izay afaka manatsara ny fivezivezen'ny rà amin'ny vatan'olombelona ary mampiroborobo ny metabolisma amin'ny vatan'olombelona, ​​mba hahafahana mamorona tontolo mafana mameno ny ...
Bushing elektrika PVC
Toetoetra miaro amin'ny lelafo: samy manana ny toetran'ny vatan'ny PVC sy ny PVC-C ireo ary azo vonoina avy hatrany aorian'ny afo. Hery mahery: ny fantsom-pahefana herinaratra PVC dia mahazaka lanja 1kg amin'ny hafanana 0 ° C sy ny tanjaky ny haavony 2m, izay maneho tanteraka ny fiakaran'ny mari-pana ambany amin'ny fitaovana, izay mihatra tanteraka amin'ny fepetra takian'ny tontolon'ny fananganana . Fampisehoana insulated: ny fantsom-pahefana PVC dia mahazaka herinaratra ambony etsy ambony ...
Pipa rano mafana sy mangatsiaka PP-R
Ny vokatra andiam-pantsaka rano mafana sy mangatsiaka PP-R dia novokarina mifanaraka amin'ny fenitra avo lenta amin'ny rafitra kalitaon'ny IS09001. Ny vokatra dia mahafeno tanteraka ny fenitry ny fidiovana GB / T18742.1, GB / T18742.2, GB / T18742.3 ary GB / T17219. PP-R fantsom-drano mafana sy mangatsiaka dia vokatra vaovao fahita any amin'ny firenena mandroso amin'izao tontolo izao ankehitriny. Mampiasa teknolojia fampifangaroana homogeneous izy amin'ny tetik'asa fitaterana rano mafana sy mangatsiaka. Ny fampisehoana teknika feno sy ny tondro ara-toekarena ...
Toetra ara-batana sy ara-simika tena tsara: ny fantsona sy ny fittings vita amin'ny PVC dia mahazaka harafesina, tanjaka avo lenta ary fanoherana ny tsiranoka ambany (30% tahan'ny fikorianana avo kokoa noho ny fantsom-by vy mitovy amin'ny 6). Fiainana lava (raha ny angona fitsapana an'ny Ministeran'ny fananganana, 40-50 ny androm-piainana), fitaovana mety tsara hananganana tatatra sy rano maloto izy io. Maivana sy azo ampiharina, mora apetraka: ny lanjany dia 1/7 amin'ny fantsom-by vy ihany, izay c ...
HDPE dia mikitroka fantsom-panafody somary mangina
Tehirizo ny akora tsotra sy ny fatiantoka ambany: ny fantsona HDPE sy ny fittings ho an'ny fifandraisana mafana miempo mafana dia fifandraisana indray mandeha, ary ny fittings dia tsy azo ampiasaina indray. Azo esorina ny fomba fampifandraisana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny famolavolana; mandritra ny fizotry ny fametrahana azy, ny fantsona HDPE dia mifamatotra amin'ny vava fisaka, tsy misy faritra mifanindry. Raha ampitahaina amin'ny fomba fifandraisana hafa, ny ...